Zvikamu mune ese eReaders
Todo eReaders iri blog yevanodya mabhuku avo, kuwedzera kune bepa, vanodawo kuverengera pazvigadzirwa zvemagetsi. Ruzivo urwo rwaunowana mune ino bhurogu runobva mumabhuku kuenda kune zvishandiso kuti uverenge, kuburikidza nesoftware iyo inobvumidza iwe kushandura chinyorwa kuita fomati inoenderana yeReader yako.
Mune maReaders ese tinotaura zvakare nezve vakugadziri vakanaka verudzi urwu rwechigadzirwa, izvo zvinokubatsira iwe kusarudza kuti ndechipi chinonyatsoenderana nezvaunoda. Kune rimwe divi, iwe unowanawo ruzivo rwakanangana nemamwe marudzi ehurdware, senge zvishongedzo, mapiritsi kana zvigadziriso zvaunogona kugadzira kuReader iyo yauinayo kare.
Asi iyi blog yaisazove yakakwana pasina nhau dzazvino, kwaunowanawo kuburitswa, nhau nezvevanyori uye zvinyorwa zvese. Iwe une zvikamu zvese zviripo pazasi. Yedu yekunyora timu nyanzvi ine basa rekuzvichengeta zvakagadziriswa kuitira kuti iwe ugare uchikwira.